Ntuziaka Blog: PGA-Auctions | Martech Zone
Ndenye Blog: PGA-Auctions
Tom rịọrọ ka m tinye blog ya, Mgbatị PGA. Obi dị m ụtọ ikweta! Tom si blog bụ banyere azụmahịa eBay ya na ọ na-elekwa anya na auction n'ihi ya enwere ọtụtụ ndị na-asọmpi n'ebe ahụ ma anyị kwesịrị inweta enyemaka ya!
Ndị a bụ ndụmọdụ Blog gị:
Nke mbụ, gbaa mbọ hụ na imezi njikọ dị na ya Ziga ya na njikọ m laghachi na blọọgụ mMgbe idetuo na mado site na HTML gaa na koodu ahụ, oge ụfọdụ ọ na-emebi ihe ahụ. M na-emelite mbụ post na a textarea… Ugbu a ọ bụrụ na i youomi ya kpọmkwem, ọ ga-arụ ọrụ.
Maka ebumnuche nchekwa, ịkwesịrị nweta nkwalite WordPress nke kachasị ọhụrụ ntọhapụ. Agụrụ m na blọọgụ gị na ị banyere n'ime ụfọdụ nsogbu nweliwe. Nke ahụ ọ ka dị? 2.0dị 2.0.10 dị ugbu a na 2.21 ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwalite na XNUMX.
Nchọgharị ọchụchọ kwesịrị ịma otu esi agagharị na saịtị gị. Ha na-eme nke a nke ọma site na ngwaọrụ ole na ole. Ngwaọrụ mbụ bụ faịlụ robots.txt. Ọ bụ naanị faịlụ ederede nke crawler gụrụ iji mara ebe ị ga-ele anya na ebe ịghara ile anya na saịtị gị. Nwere ike ime faịlụ ahụ na-eji Notepad na mgbe ahụ FTP'ing ya na sava gị wee dowe ya na ndekọ weebụ.
Onye ọrụ-ọrụ: * Disallow: / wordpress / wp- Sitemap: http://www.pga-auctions.com/wordpress/sitemap.xml
Zọ ọzọ Nchọgharị Nchọgharị ga-abanye na saịtị gị bụ site na a Sitemap. Ahụrụ m 3.0b7 n'anya karịsịa Ntanetị Google Sitemap. Emego m gbanwee ya ka edoe Yahoo! nakwa zigara koodu na-ede akwụkwọ na-ede akwụkwọ ma ọ na-adịghị wuru ya n'ime ọzọ ntọhapụ ma. Nke a ga-ewu saịtị saịtị.
Ugbu a - ọ na - enweta ntakịrị aghụghọ ebe ọ bụ na inwee websaịtị NA WordPress blog. Nwere ike ọ gaghị ama ya, mana WordPress 'tọhapụrụ ọhụrụ ugbu a nwere njirimara ebe ị nwere ike ịme ibe ọ bụla n'ụlọ peeji ahụ wee rapara na blog gị ebe ọzọ. Nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịkwaga ibe gị (Ajụjụ, Iwu, wdg) ị nwere na blọgụ gị ma nwee WordPress na-ejikwa ha. Ihe dị na ya bụ na ịnwere ike ịnwe ha na saịtị saịtị gị na - akpaghị aka! Aga m akwado ịkwado ime nke a na itinye WordPress gị nke ọma na ndekọ ndekọ aha saịtị gị!
Nwere ike ịmegharị saịtị ahụ na-enweghị akpaghasị ọdịnaya ị megoro wee nwee nsogbu ọ bụla ebe ahụ! Ọ bụrụ na ịmee nke a, gbaa mbọ hụ na ị gbanye faịlụ robots.txt gị iji tụọ saịtị saịtị ahụ na ndekọ aka nri.
I nwekwara ike ichikota eBay ziri ezi na WordPress! Na nke a ederede m huru, saịtị ahụ jiri eBay nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ ịgbakwunye ihe Ndepụta Ngwaahịa dị na sidebar WordPress ha.
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ịnara ndụmọdụ site n'aka onye na-enweghị aha, nri? M ga-etinye foto gị na ibe gị. Ọ bụrụ na ọ dị mma (egwu egwu), ị nwedịrị ike itinye ya na isiokwu gị na ibe ọ bụla. Emela ihere igwefoto - ndị mmadụ nwere ekele maka ịmara onye blọọgụ ha na-agụ site na ile ha anya.
Gbanwee ndepụta gị Feedpress iji WordPress Feedburner ngwa mgbakwunye ka ị nwee ike ịdegharị ole ndị folks na-agụ blog gị site na RSS wee tinye njikọ RSS gị na akara ngosi dị elu na sidebar gị ka ndị folks wee chọta ya.
. Feedburner nwekwara nhọrọ ndị ọzọ, dịka ụdị ndebanye aha email ị nwere ike itinye na saịtị gị.
M kwuru ngwa mgbakwunye a abụọ ọzọ Atụmatụ: Iji mee ka ndị mmadụ nọrọ, m ga-akwado ha Njikọ posts ngwa mgbakwunye ma tinye posts ndị yiri ya na ala nke ọ bụla n'ime posts gị. Wayzọ a ndị na-achọta gị site na Nchọgharị Nchọgharị ga-agụ post gị ma ọ bụrụ na ha ahụghị ihe ha chọrọ, ha nwere ike ịrapara maka isiokwu ndị ọzọ dị na otu isiokwu ahụ. Nke a ga-enyekwa aka miri na ejikọ maka Nchọgharị Nchọgharị.
Kedu ka ị si mara ihe ndị folks na-agụ na saịtị gị? Don't gaghị enwe ngwugwu nchịkọta mara mma. Aga m akwado Nchịkọta Weebụ Pịa. Ọ bụrụ na ị nweta mbipute Pro, ị nwere ike ibudata ngwa mgbakwunye WordPress iji mee ka ị bilie ma na-agba ọsọ!
You'll ga-amụta ọtụtụ ihe site na ịmara ebe ndị ọbịa gị na-abịa, ihe ha na-achọ, wdg.
Ihe niile gbasara ịchọta, Tom! Anyị kwesịrị ịgwa Search Enjini otu esi achọta gị na ndị na-agụ ya na njin nchọta ihe ga-abịa. Do na-arụ nnukwu ọrụ nke ikenye onyonyo ma dee ederede doro anya. Udiri aha gi dicha iche… n’enweghi mgbagha obula anyi nwetara igwe ihe ichoro ichotara gi, blog gi gha amalite ịrị ugwu na ulo ahia gi eBay na ahia!
Tags: blogpịaebaynjikọPermalinkyiri postssearch enginessecurityWordPress
Kedu ihe bụ Wiki? Vidio
Jul 9, 2007 na 2: 37 AM
Ngwá ọrụ nchịkọta dị ezigbo mkpa maka Blog, ọzọ ị gaghị enwe ike ịkọ ihe na-eme na blọọgụ gị.
Enwere m blọọgụ na-enweghị nchịkọta akụkọ maka otu afọ, n'agbanyeghị na m gụrụ otu n'ime mgbasa ozi blog dị ka nke a. M ji Clicky n’oge gara aga, agbanyeghị, ihe kacha mma m ga - ekwu bụ GoStats.com , ha nwere usoro ịba mba zuru ezu.